नेपाल आज | राष्ट्रियतामा सरकारलाई साथ, प्रधानमन्त्रीलाई शंका नगरौं (भिडियोसहित)
भिडियो कभर स्टोरी
राष्ट्रियतामा सरकारलाई साथ, प्रधानमन्त्रीलाई शंका नगरौं (भिडियोसहित)
बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टीका आन्तरिक समस्या, छिमेकीसंगको सीमा विवाद, आफ्नो बिग्रदो स्वास्थ्यकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिवर्तनको अनुभूति गराउने प्रयास जारी राखेका छन् । सरकार जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको गुनासो आएपछि उनले सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्समेत फेरबदल गरेका छन् ।
अस्वस्थताबीच प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सकारात्मकरुपमै हेरेको छ । मुलुक र जनताको निम्ति इमान्दार भएर गरिएका प्रयासलाई हतारमा आलोचना गर्नु राजनीतिक संस्कार होइन । अझ, सीमा अतिक्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जुटाएको राजनीतिक सहमति पनि राम्रो काम भएको बताउँछन् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ ।
गुरुङ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई शंका गर्नु हुँदैन । बर्षौदेखि अतिक्रमणमा परेको सीमा फर्काउने कुरा एक दुई दिनमा हुँदैन । कुटनीति भनेको भित्रभित्रै हुने कुरा हो । धेरै कुरा बाहिर आएका हुँदैनन् । सरकारले पक्कै केही काम गरिरहेको हुनुपर्छ । मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षामा सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ ।’
जहाँसम्म सचिवालय र मन्त्री फेरबदलको कुरा छ, यसले केही हदसम्म सरकारको गतिमा परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर कायापलट नै हुन्छ भन्ने विश्वास छैन ।
सीमा विवाद अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल नै सबैभन्दा उत्तम हो । तत्काल मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा सीमा सुरक्षा बल पठाएर भिडन्त गर्ने भन्ने कुरा आवेश र उत्तेजना मात्र हुन् ।
गुरुङ भन्छन्, ‘तत्काल संसद बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको सीमाको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुन्छ । विचार राख्नु हुन्छ । उत्तर होस वा दक्षिणको छिमेकी कसले कहाँ अर्घेल्याईं गरेको छ, त्यो संसदमै स्पष्ट हुन्छ । संसदबाट प्रस्ताव पास गरेपछि अनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने हो । यति गर्दा विवाद हल हुन्छ । ’
सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि सरकारी संयन्त्रलाई ती स्थानमा पुर्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्र नपुग्नु भनेको सरकारी इच्छाशक्ति नहुनु देखिन्छ । अब केन्द्रसहित प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएर रणनीतिकरुपमा सुरक्षा तथा सेवामूलक सेवा विस्तार गर्नु अनिवार्य छ ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियताको मामिलामा सरकारको साथमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले आत्मबल बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । तर, जहाँसम्म सरकारले एकलौटी ढंगले अधिनायकवादको गन्ध आउने किसिमले काम गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ सच्याउनुपर्छ । २१ महिनाको अवधिमा सरकारका २१ असफलताबारे प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइसक्नु भएको छ ।
यो सरकारले २१ महिना पूरा गरेको छ । अब तीन वर्ष तीन महिना बाँकी छ । यो अवधि चलाउने पनि नेकपाले नै हो । जति गलत र विवादास्पद काम गरेपनि विधिसम्मत रुपमा सरकार ढल्ने अवस्था छैन । सरकारकाविरुद्ध आन्दोलन गरेर सरकार ढाल्ने परिकल्पना कांग्रेसले गरेको छैन । यसो गर्दा संविधान नै खतरामा पर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले यसको रक्षाका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छ ।
‘सरकारले यो अवधिमा एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएको छ तर एउटा पनि नेपालीलाई सुखी राख्न सकेको छैन । को छ आज सुखी ?’ गुरुङको प्रश्न छ ।
मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनले पनि सरकारको अलोकप्रियता देखाउने छ । कांग्रेस कमजोर भएको थियो, तर अहिले तङ्ग्रिदै छ । उपनिर्वाचनको परिणामले पनि यो सत्य सावित गर्नेछ ।
डा. केसी भन्छन्– शेरबहादुरकी स्वास्नी पनि हामीले नै वोकिदिनु पर्ने ?
आइतबार, २० भदौ २०७८
नविन भन्छन्ः एमसिसि रोक्न कसैलाई विश्वास गर्न सकिदैन, युवाहरुले नै संर्घष गर्नुपर्छ (भिडियो)
बिहिबार, २८ साउन २०७८
एमसीसी रोक्न उपेन्द्र यादवलाई चीनियाँ राजदूत यान्छीको दवाव (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, २६ साउन २०७८